Home Wararka Gudaha Guddoomiye Cumar Filish oo qaabilay mas’uuliyiin ka socday WHO iyo UNICEF
Guddoomiye Cumar Filish oo qaabilay mas’uuliyiin ka socday WHO iyo UNICEF
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socday hey’adda Caafimaadka aduunka ee WHO iyo Hey’adda UNICEF oo uu hogaaminayay Madaxa hey’adda u qaabilsan Barig iyo Bartamaha Afric Mr. Xasan Qumural.
Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Filish iyo madaxda Hey’adda WHO ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa horumarinta adeegyada Caafimaadka gobolka Banaadir oo haatan ay si buuxda ula wareegtay Dowlada Hoose ee Xamar, iyadoo kulankan ay goob joog ka ahaayeen Agaasimaha Caafimaadka gobolka Banaadir iyo Agaasimaha guud ee arimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir.
Madaxa hey’adda Caafimaadka u qaabilsan Barig iyo Bartamaha Afric Mr. Xasan Qumural ayaa ku amaanay maamulka gobolka Banaadir horumarka ay ka sameeyeen dhinac Talaalka sida Dabeesha, Jadeecada, Qaaxada, Nafaqa la’aanta iyo COVID-19.
“ Waxaan idin ku amaanaya horumarka aad ka sameyseen dhinaca Caafimaadka oo ah da’daal muuqdo, anaga dhinaceena waxaan diyaar u nahay taageera dhan walba ah oo lagu xoojinaayo Caafimaadka Soomaaliya gaar ahaan kan Muqdisho”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ugu mahadceliyay Hey’addaha WHO iyo UNICEF garab istaaga ay u muujiyeen maamulkiisa muda uu xafiiska joogay.
“Si gaar ah ayaan idin kaga mahadcelinaaya sida aad u taageerteen maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan dhinaca Caafimaadka iyo Barakacyaasha oo horumar badan laga sameeyay waxaana diyaar u nahay in aan sii socodsiino mashaariicda adeegyada aas aasiga la xariira”.
Previous articleRag hubeysan oo weerar ku dilay 55 Ruux
Next articleGuddiga loo xilsaaray diyaarinaya Sharciga Miisaaniyadda oo Guddoon doortay
Hoggaamiyaha kooxda Taalibaan oo markii ugu horreysay tegay KABUL
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dalka oo soo xiray imtaxaankii shahaadiga ahaa...